DAAWO: D.Gobaleedyada, DF Soomaaliya & Beesha Caalamka oo shir uga furmayo maanta Addis Ababa.
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Kulan looga hadlayo ahnaanka maaliyadeed ee Soomaaliya iyo habka deyn cafinta ayaa maanta ka furmaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxaana kulanka maanta wadajir uga qeybgalaya wasaaraddaha dawlad gobaleedyada ee Maaliyada Soomaaliya, kuwaas oo jeedin doona sida ay la tahay in looga gudbi karro hanaanka deyn cafinta Soomaaliya.
Xukuumadda Faderaaka ee Soomaaliya ayaa Hay’addaha lacagta ee Aduunku ay ku qasbeen in aykeento dawlad gobaleedyada la`aantoodna aysan waxba horey u socon karin, waxaana kulamadan lafilayaa in lagu soo bandhigo hanaanka wadajirka deyn cafinta oo ay ka wada shaqeynayaan.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya iyo Agaasimaha Bangiga Aduunka u qaabilsan Soomaaliya ayaa kulankan wadajir u shir gudoominaya, waxaana kusugan inta badan wasiirada dawlad gobaleedyada, iyadoo ay Jubbaland ka joogaan wakiilo sidda ay wararku sheegayaan.
Bangiga Aduunka iyo Hay`adda lacagta aduunka ee IMF ayaa wada jir ugala shaqeynaya Soomaalida sidii ay uga gudbi lahaayeen hanaanka deyn-cafinta, kaas oo lasoo bilaabay waqtigii uu xukunka la wareegay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud.
Caalamka ayaa ku amaanay Soomaaliya geedi socodka xagga maaliyadda ah, waxaase ilaa hadda dood ka taagan tahay in aan la ansixin sadexdii sanno ee lasoo dhaafay xisaabxirka wasaaradda Maaliyadda, taas oo ka dhigan in aan wali horumar fiican oo la dagaalanka Musuqmasuqa ah la gaarin.
Bangiga Aduunka ayaa dhawaan shaaciyey in ay koror dhaqaale ay sameysay Soomaaliya, wuxuuna sheegay in uu horey u socdo dhaqaalaha dalku oo uu sannadkan kobcay, waxayna soo jeediyeen talooyin ku wajahan arrimahan.